Ezinụlọ Jizọs Agbaga Ijipt | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
GỤỌ NKE Alur Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Toba) Bicol Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lomwe Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mauritian Creole Maya Moore Myanmar Ndau Nigerian Pidgin Norwegian Nyungwe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Thai Tigrinya Tok Pisin Tshiluba Tshwa Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruund Uzbek Vietnamese Wallisian Waray-Waray
EZINỤLỌ JIZỌS AGBAGA IJIPT
JOSEF AKPỌRỌ EZINỤLỌ YA KWAGA NAZARET
E nwere otu ozi dị oké mkpa Josef kpọtere Meri n’ụra zie ya. Mmụọ ozi Jehova ka gwapụrụ ya ná nrọ, sị: “Bilie, kpọrọ nwatakịrị a na nne ya gbaga n’Ijipt, nọrọkwa n’ebe ahụ ruo mgbe m ga-enye gị iwu; n’ihi na Herọd ga-achọ nwatakịrị a ka o gbuo ya.”—Matiu 2:13.
Josef egbughị oge kpọrọ Meri na nwa ha gbapụ n’abalị ahụ. Ọ dị mma na ha egbughị oge gbapụ, n’ihi na ozugbo ha pụrụ, Herọd matara na ndị ahụ na-agụ kpakpando aghọgbuola ya. Ọ gwaburu ha na ha hụ Jizọs, ha laghachi bịa kọọrọ ya. Kama ịgaghachi kọọrọ ya, ha si ụzọ ọzọ laa. Ihe a ha mere were Herọd ezigbo iwe. Ọ ka chọsiri ike igbu Jizọs. N’ihi ya, o nyere iwu ka e gbuo ụmụaka nwoke niile dị afọ abụọ gbadaa, bụ́ ndị a mụrụ na Betlehem na n’ógbè niile dị ya nso. Ihe mere o ji sị ka e gbuo ndị dị afọ abụọ gbadaa bụ n’ihi na ihe ahụ ndị na-agụ kpakpando gwara ya mere ka o were ya na nwa ahụ ga-adị ihe dị ka afọ abụọ.
Ogbugbu ahụ e gburu ụmụntakịrị nwoke niile jọgburu onwe ya. Anyị amaghị ụmụntakịrị ole e gburu. Mana, mkpu ákwá ụmụ nwaanyị ndị e gburu ụmụ ha nọ na-eti mezuru otu amụma Baịbụl onye amụma Chineke, bụ́ Jeremaya, buru.—Jeremaya 31:15.
Ma, Josef akpọrọla ndị ezinụlọ ya gbaga Ijipt, ha ebirizie ebe ahụ. N’otu abalị, mmụọ ozi Jehova bịakwutere Josef ọzọ ná nrọ, sị ya: “Bilie, kpọrọ nwatakịrị a na nne ya lawa n’ala Izrel, n’ihi na ndị na-achọ mkpụrụ obi nwatakịrị a anwụwo.” (Matiu 2:20) Josef kpọziiri ezinụlọ ya laghachi n’obodo ha. Amụma ọzọ dị na Baịbụl sizi otú a mezuo. Amụma ahụ kwuru na e si n’Ijipt kpọpụta Ọkpara Chineke.—Hosia 11:1.
O nwere ike ịbụ na Josef chọrọ ka ezinụlọ ya biriwezie na Judia, nke o nwere ike ịbụ na ọ dị Betlehem nso, bụ́ ebe ha bibu tupu ha agbaga Ijipt. Ma, Josef nụrụ na ọ bụ Akeleyọs, nwa Herọd, na-achịzi Judia. Akeleyọs a bụkwa eze ọjọọ. N’ihi ya, Chineke dọrọ Josef aka ná ntị ná nrọ na nsogbu dị. Josef kpọziiri ezinụlọ ya gawa n’ebe ugwu, birizie n’obodo Nazaret nke dị na Galili. Obodo a dịtụ anya na Jeruselem, bụ́ ebe a kacha ekpe okpukpe ndị Juu. Ọ bụzi n’obodo a ka Jizọs nọ tolite. E sikwa otú a mezuo amụma ọzọ nke sịrị: “A ga-akpọ ya onye Nazaret.”—Matiu 2:23.
Mgbe ndị ahụ na-agụ kpakpando na-agaghachighị na nke Eze Herọd, olee ihe Herọd mere, olekwa otú e si chebe Jizọs?
Mgbe Josef si n’Ijipt na-alọta, gịnị mere ya na ezinụlọ ya agaghị biri na Betlehem?
N’oge a, olee amụma ndị dị na Baịbụl e mezuru?